किनेको मूल्याभन्दा दोब्बर बढीमा बेच्दा पनि निगमलाई थेग्नै नसक्ने घाटा ! – सुनौलो अनलाइन
किनेको मूल्याभन्दा दोब्बर बढीमा बेच्दा पनि निगमलाई थेग्नै नसक्ने घाटा !
सुनौलो अनलाइन५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १२:४०
कामाडाैं, ५ फागुन । एक सातामै पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भएको छ । गत माघ २८ गते बुधबार मात्रै नेपाल आयल निगमले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी बढाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्य बढेर घाटा चुलिएकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएर आएपछि मूल्य बढाउनु परेकाे निगमले जनाएकाे ।
वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ १३ पैसा नोक्सान हुने निगमले जनाएकाे छ । मट्टितेलको नाफा घटेर प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ ५२ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको नाफा ३४ रुपैयाँ १९ पैसामा झरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर २९५.८३ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमले भने आइओसीसँग पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँ ९७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ २६ पैसा तथा तथा एलपी ग्यास एक हजार १२९ रुपैयाँ ८१ पैसामा किन्ने जनाएकाे छ ।
किनेकाे मूल्यभन्दा दाेब्बर बढीमा बेच्दा पनि पाक्षिक रु ८६ करोड ७८ लाख हुने निगमको प्रक्षेपण छ । यो लागत, कर तथा निगमको अन्य दायित्वसमेत गर्दा मूल्य समायोजनपश्चात पनि कूल घाटा हाे ।
लकडाउन शुरु हुँदाको समय सन् २०२० अप्रिल १ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमले आइओसीलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ६८ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक हजार १४ रुपैयाँ ०९ पैसा मूल्य तिर्नुपर्थ्याे ।
निगमले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर ९५० अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यास रु एक हजार ३७५ मूल्य तोकेको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थाँती राखेर त्यतिबेला पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एकैपटक १०/१० रुपैयाँ घटाएर उक्त मूल्य कायम गरिएको थियो ।
निगमकाे मूल्य स्थिरीकरण कोषमा नौ अर्ब
“अहिले कोषमा रु नौ अर्ब जति छ । अहिले मासिक नोक्सान नै रु दुई अर्ब पुग्ने अवस्था आइसक्यो । अझै मूल्य बढ्यो भने नोक्सान योभन्दा माथि पुग्न सक्छ”, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “यो हिसाबले त यो कोषले चार महिना पनि धान्न सक्दैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोगले समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।”